Madaxweyne Shariif oo guddi cusub u magacabay wadahalada dhexmaraya DKMG iyo Somaliland oo Arbacada furmaya | Calanka Somalia
← Khilaafkii Dastuurka Oo Saameeyay Mr. Shariif & Mr.Gaas
Maamulka Somali Land Oo Shaaca Ka Qaaday Mowqifkooda Shirka Londdon →
Madaxweyne Shariif oo guddi cusub u magacabay wadahalada dhexmaraya DKMG iyo Somaliland oo Arbacada furmaya
Madaxweynaha dawladda KMG Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay inuu si rasmi ah u magacaabay guddi cusub oo uga qeybgeli doona wadahadalada maamulka Somaliland iyo dowlada KMG Somalia 20-ka June 2012-ka uga furmi doona magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Guddigan ayaa la sheegay inuu wax badan ka bedelan yahay kii hore uu u agacaabay Madaxweynaha oo ay ka biyo diideen maaamulka Somaliland.
Wargeyska Jamhuuriya ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa qoray in Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu magacaabay Guddi cusub oo ugu qeyb galaya wadahadalada dhexmaraya dowladda KMG iyo maamulka Somaliland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood, isagoo la socodsiiyey maamulka Somaliland arintaas.
Guddiga uu magacaabay Madaxweynaha dowladda KMG Somalia ee ka qeybgalaya wadahalka ayaa waxay magacyadooda kala yihiin:-
1-Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka C/samad Macallin Maxamuud Sheekh Xasan (Guddoomiye)
2. Wasiirka Hiddaha iyo Tacliinta sare ee dowladda KMG Axmed Caydiid Ibraahimm (Xubin).
3. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda KMG Somalia
4. Xildhibaan Xuseen Xasan oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya.
5. Xildhibaan Maxamed Xasan Aadan oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Wadahadalada u bilaabmaya toddobaadkan Somaliland iyo Soomaaliya ayaa waxay ku saabsanaan doonaan qodobadda mudan in laga hadlo ee khuseeya labada dhinaca, hadday tahay siyaasadda, nabadgelyada, iskaashiga iyo xiriirka la wadaagi karo, iyadoo qodobada ugu xaasaasisan ee miiska saaran ay la xiriiraan arrimaha siyaasadda.
Waa markii u horeysay ee Somaliland iyo Soomaaliya isugu yimaadaan wadahadallo noocan oo kale ah, iyadoo kulanka gogol-xaarka ahna ay ku xigi doonaan wadahadallo dhexmara labada Madaxweyne ee Somaliland iyo Soomaaliya, kaas oo la sheegay in lagu qaban doono dal kale, gaar ahaan dal carbeed.
Kulanka u dhaxeeya dowladda KMG Soomaaliya iyo maamulka Somaliland maalinta arbacada ah ee soo socda ka furmaya magaalada London ayaa la sheegay inay goob joogayaal ka noqonayaan dowlado iyo ururo caalami ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland, Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in wadahadallada dhexmaraya dowladda KMG Soomaaliya iyo Somaliland ay dooneyaan iney ku soo bandhigaan madax banaanida iyo himilada shacabka Somaliland.
Somaliland waxaa uga qeybgalaya wadahadalada shan xubnood oo shalay ka dhoofay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland iyagoo ku sii jeeda dalka Ingiriiska oo shirkaas uu ka furmi doono 20-ka bishan oo ku beegan maalinta Arbacada.